पिसिआरभन्दा छिटो अब कुकुरले पत्ता लगाउन सक्छ कोरोना संक्रमण, तर कसरी ? — Imandarmedia.com
पिसिआरभन्दा छिटो अब कुकुरले पत्ता लगाउन सक्छ कोरोना संक्रमण, तर कसरी ?
त्यस्तै, यी तालिमप्राप्त कुकुरलाई कोरोना परीक्षण केन्द्रसम्म सजिलै जान नसक्ने वृद्धवृद्धा र शारीरिक रूपले अशक्त व्यक्तिको कोभिड परीक्षणमा समेत खटाइएका छन्। सहरका कारागारमा पनि कुकुरबाट कोराना परीक्षण गराउने कार्यक्रम छ। पछिल्लो समय कारागारमा ठूलो संख्या कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ।
थाइल्यान्डमा केही समययता कोरोना महामारीको नयाँ लहर फैलिएको छ। यहाँ कोरोना खोप पनि पर्याप्त उपलब्ध छैन। अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशतभन्दा कमले खोप लगाएका छन्।
कोरियाको क्रुज मिसाइल अमेरिका धोस्त गर्न सक्ने, बाइडेन ठुलो तनाबमा
चीनको लागि जासुसी गरेको भन्दै भारतले नेपाली नागरिकलाई पक्राउ गर्‍यो
तालिबानका आफ्नै गुटभित्र भिडन्त, राष्ट्रपति बन्ने भनिएका अब्दुल गनी बरादरको अवस्था गम्भीर
अज्ञात सैन्य विमानद्वारा तालिबानमाथि आ’क्र’मण
तालिवानको नाम लिदैं चीनले फेरि गर्यो यति ठूलो घोषणा, हल्लियो अमेरिका
अमेरिकाका मोस्ट वान्टेड अपराधी तालिबानका गृहमन्त्री, ५८ करोड छ टाउकोको मूल्य